६ कम्पनीका नक्कली स्यानिटाइजर उत्पादनमाथी प्रतिवन्ध, कुन कुन कम्पनी परे कारवाहीमा ? - Artha Path Artha Path
६ कम्पनीका नक्कली स्यानिटाइजर उत्पादनमाथी प्रतिवन्ध, कुन कुन कम्पनी परे कारवाहीमा ?
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले कक्कली स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने ६ कम्पनीलाई कार्रवाही गरेको छ । कोरोनाको बेलामा प्रयोग हुने ह्याण्ड स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने ६ कम्पनीका स्यानिटाइजर नक्कली रहेको भन्दै कम्पनीले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले बजार अनुगमनको क्रममा शुक्रबार ६ कम्पनीमाथी कार्रवाहीको डण्डा चलाएको हो । बजार अनुगमनका क्रममा मानव स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने मेथानोल प्रयोग भएको पाइएपछि प्रतिवन्ध लगाइएको हो । त्यस्ता नक्कली स्यानिटाइजर बजारमा विक्री वितरण भएपछी विभागले प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
तोकिएको मापदण्ड विपरितका ‘इन्स्ट्यान्ट ह्याण्ड स्यानिटाइजरसम्बन्धी स्तर २०७६’ विषाक्त रसाएन मेथानोल भेटिएपछि सरकारले सो कम्पनीलाई विक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । कार्रवाहीमा पर्ने कम्पनीहरुमा सीता हर्बल सुनसरी, मकालु जडिबुटी सुनसरी, सुनिमा आयुर्वेद कम्पनी मोरङ, एमके हर्बल ललितपुर र ग्यालेक्सी डेण्टल एण्ड सर्जिकल मोरङ रहेका छन ।
काठमाडौं । कोरोनाको कारणले गर्दा बैंकका सेवाग्राहिहरुलाई पर्न गएको विभिन्न बैंकिङ्ग समस्याको समाधानको निम्ति सेञ्चुरी
स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा अस्पताल निर्माण हुने, अर्थ मन्त्रालयद्वरा ५७ अर्व ९७ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले देशभर अस्पताल नभएका क्षेत्रमा ३ सय ९६ ओटा आधारभुत अस्पताल निर्वाण गर्ने
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफा ४१ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासामा १ करोड २ लाख रुपैयाँ
वोमी लघुवित्तको शेयर रजिष्ट्रारमा कुमारी क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र कुमारी क्यापिटल लिमिटेड बीच शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक्ता